Macallimiinta dalka Kenya oo dalbaday hub ay kula dagaallamaan Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Macallimiinta dalka Kenya oo dalbaday hub ay kula dagaallamaan Al-Shabaab
Macallimiinta dalka Kenya oo dalbaday hub ay kula dagaallamaan Al-Shabaab
Gaarisa (Halqaran.com) – Ururka macalimiinta ee dalka Kenya ayaa ku baaqay in la hubeeyo macalimiinta ka howlgalo deegaannada ay ka dhaceen weerarada dalkaas isla markaasna macalimintaas la siiyo tabbabar militari iyo qoryo si ay ammaankooda u sugaan.
Saraakiil ka tirsan ururka macalimiinta dugsiyada hoose ee Kenya ayaa arrintani sheegay kaddib markii ay la kulmeen macalimiin kasoo cararay deegaanka Kamuudey ee ku yaal duleedka Gaarisa kaddib weerarkii dhawaan ka dhacay halkaas. Weerarkaas waxaa lagu dilay saddex macalin.
Sidoo kale wuxuu sheegay in weerarada inta badan ay dhaceen xilli habeen ah markaas oo booliska ka tageen agagaarka Iskuullada.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli dhawaan ururada macalimiinta ee dalka Kenya ayaa ku hanjabeen in macalimiinta ka howlgala waqooyi bari ee kasoo jeedo gobollada kale ee dalkaas inay kasoo daadgureyn doonaan halkaas .
in la hubeeyo macalimiinta Kenya
si ay ula dagaalamaan Al Shabaab
Ururka macalimiinta ee dalka Kenya